Nianjera sy may ny fiaramanidina mpandeha tao Texas, olona 21 no tafavoaka velona
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Nianjera sy may ny fiaramanidina mpandeha tao Texas, olona 21 no tafavoaka velona
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Nianjera sy may ny fiaramanidina mpandeha tao Texas, olona 21 no tafavoaka velona.
Araka ny filazan'ny sheriff, Troy Guidry, any an-toerana, dia tafita soa aman-tsara avokoa ny mpandeha sy ny ekipa 21, na dia iray aza no naiditra hopitaly naratra lamosina.
Ny fianjerana dia nitranga tao amin'ny faritr'i Waller, akaikin'ny tanànan'i Katy, ary akaikin'ny seranam-piaramanidina mpanatanteraka any Houston.
Na eo aza ny fahasimban'ny afo amin'ny fiaramanidina, tsy nisy ny aina nafoy, na ny tany na ny mpandeha.
Ny fiaramanidina mpiambina, MD-80, dia niainga tamin'ny 10 ora maraina teo an-toerana, ho any Boston, Massachusetts.
Fiaramanidina mpandeha iray no nianjera ary nodorana tao Waller County, akaikin'ny tanànan'i Katy, Texas ary akaikin'ny Seranam-piaramanidina mpanatanteraka any Houston anio, hoy ny Departemantan'ny fiarovana ny besinimaro any Texas.
Fiaramanidina iray an'ny komuter sy MD-80, nidina ary nirehitra, araka ny sary an-tsary mahavariana avy tany an-toerana.
Mahagaga fa ny olona 21 tao anaty sambo rehetra dia afaka nandositra ny fiaramanidina, hoy ny tompon'andraikitra ao an-toerana.
Mampiseho setroka setroka mainty be dia be avy amin'ny zava-niseho ny sary rehefa nanandrana namono ireo potipotika may ireo mpamono afo.
Ny toerana nitrangan'ny fianjerana dia teo akaikin'ny zoron'ny Morton sy ny Cardiff Roads. Na eo aza ny fahasimban'ny afo amin'ny fiaramanidina, tsy nisy ny aina nafoy, na ny tany na ny mpandeha.
Voalaza fa nitranga ny loza rehefa niainga tamin'ny 80 ora maraina ny sidina, MD-10, ho any Boston. Nankany avaratra, toa tsy nahomby tamin'ny faran'ny lalambe izy ireo ary niampita ny arabe fa nijanona ary nirehitra tamin'ny farany.